समाचार – Chautari Online
काठमाडौ । चितवनको रवि रुवाली र रञ्जना मैनालीको घटनामा अदालतले एक वर्ष पछि फैसला सुनाएको छ । अदालतले रञ्जनालाई दो षी ठहर गरेको छ । साथै रविको परिवारलाई उनले लिएको पैसा पनि फिर्ता तिर्नु पर्ने फैसला सुनाएको छ । रवि रुवालीको बुवाले अदालतको यो फैसलाले आफुहरुले आंशिक न्याय पाएको बताए । आफुहरुले ५ वर्ष कै द हुनुपर्ने माग राखेको भएपनि अदालतले २३ दिनको कै द मात्र फैसला सुनाएको बताएका छन् । गएको १९ गते भएको फैसलाले रञ्जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने २८ गतेको फैसलामा रञ्जनालाई कै द सजाय सुनाएको छ । रञ्जनाले रविको घरवाट अध्ययनका लागि खर्च गरेको रकम पनि फिर्ता पनि गर्नुपर्ने भएको छ । रविको बुवाले ५० लाख रुपैया लगानी गरेको दावी गरेका थिए तर अदालतले २१ लाख र त्यसमा लाग्ने ब्याज पनि तिर्नुपर्ने बताएका छन् । रविसंग विवाह भएपछि रञ्जना अष्ट्रेलिया पढ्न गएकी थिइन् । त्यती बेला अष्ट्रेलियामा पढ्न लाग्ने
काठमाडौं । एक पुरुष कल गर्लका नाममा नराम्रोसँग लुटिएका छन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको नोएडामा अनलाइनमार्फत कल गर्ल प्रदान गर्ने नाममा त्यसरी फसाइएको हो । जानकारी अनुसार त्यहाँका एक ३० वर्षीय व्यक्तिलाई कल गर्लका नाममा १६ हजार रुपैयाँ ठगिएको समाचार बाहिर आएको छ । ति युवकले यस सम्बन्धमा दुई व्यक्तिको बिरूद्ध प्रहरीमा उजुरी पनि दिएका छन् । प्रहरीले पनि घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार पीडित मूल रुपमा लखनऊको सेक्टर–३९ प्रहरी चौकी क्षेत्रमा बस्छन् । ६ नोभेम्बरमा कल गर्लका लागि उनले एक युवकसँग अनलाइनबाट सम्पर्क गरेका थिए । उक्त युवकले प्रहरीलाई बताए कि १६ हजार रुपैयाँमा कल गर्ल उपलब्ध गराउने कुरामा सहमति भएपछि उनीहरुबीच भेट गर्ने कुरा भएको थियो । भेट्नका लागि उनलाई बोटानिकल बगैंचा मेट्रो स्टेशनमा बोलाइएको थियो । मेट्रो स्टेशनमा पुगेका युवकलाई १६ हजार रुपैयाँमा स
१ मंसिर, काठमाडौं । हङ्कङको जोर्डनमा सन्चालित एक नेपाली रेष्टुरेन्टमा आगलागी हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ । १३ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये सात जनाको अवस्था गम्भीर छ । हङकङका मिडियाहरुका अनुसार रेष्टुरेन्टमा आइतबार राति करिब ८ बजेतिर आगलागी भएको थियो । आगलागीमा परेर चार जना पुरुष र तीन जना महिलाको मृत्यु भएको हो । बालबालिकासहितका केही व्यक्तिहरुलाई उद्धार गरिएको छ । यो नेपालीहरुले लाइसेन्स नलिइकन सन्चालन गरेको रेष्टुरेन्ट भएको र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यो पनि पढ्नुहोस् १ मंसिर, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ११९७ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभरका प्रयोगशालामा ४ हजार ८३२ नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरुमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यससँगै कुल संक्रमितको संख्या २ लाख १० हनार ९७३ पुगेको छ । उनीहरुमध्ये १२३० जनाको मृत्यु भएको छ भने १ ल
एजेन्सी – अहिलेसम्म बजारमा गर्भनिरोधकका जति पनि खोप तथा औषधि उत्पादन भएका थिए ती महिलाहरुका लागि थियो । पुरुषका लागि गर्भनिरोधको एउटा मात्रै उपाय कण्डम थियो । तर, निकट भविष्यमा नै भारत लगायतका मुलुकमा पुरुषका लागि गर्भनिरोधक खोप बजारमा उपलब्ध हुने भएको छ । यो खोप एकपटक लगाएपछि १३ वर्षसम्म प्रभावकारी हुने अनुसन्धानमा पत्ता लगाइएको छ । इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) का अनुसार पुरुषका लागि बनाइएको उक्त खोप विश्वस्तरीयरुपमा सुरक्षित, प्रभावकारी र लामो समयसम्मका लागि उपयोगी साबित हुनेछ । यसको प्रयोग ३०० जना पुरुषमा गरिएको छ । तीन पटकसम्म चलेको उक्त क्लिनिकल ट्रायलमा साइड इफेक्ट नभेटिएको आईसीएमआरले जनाएको छ । आईसीएमआरका सीनियर वैज्ञानिक डा. आर एस शर्माका अनुसार तयार भएको उक्त खोपका लागि भारतीय सरकारको स्वीकृति आवश्यक रहेको छ । ट्रायलमा उक्त खोपको प्रभावकारीता ९७.३ प्रतिशत भएको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमण भएर शिक्षण अस्पताल महारजगंजको गणेशमान सिंह भवनमा भर्ना गरेर उपचार गरिरहेका डा. केसीको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएपछि डा. केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्ने तर सरकारले जनताप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । सामाजिक संजाल मार्फत डा केसीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उनको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्योहोर्ने बताएका थिए । उनले भनेका छन्, ' म कोभिड -१९ बाट संक्रमित भएपछि प्रम केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको स्वास्थलाभको शुभकामना सन्देशको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले मेरो उपचार खर्च बेहोर्छु भनेको सन्दर्भमा भने मेरो उपचार खर्च म आफैँ बेहोर्छु बरु सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य पूरा गरोस् ।' डा. केसीले अगाडी भनेका छन्, 'हामीसँग पटक पटक गरिएका सम्झौता कार्
३० कात्तिक, काठमाडौं । वरिष्ठ हास्य कलाकार मनोज गजुरेल कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् । ११ दिनको अस्पताल बसाइँ पछि उनी घर फर्किएर आराम गरिरहेका छन् । यसको जानकारी गजुरेल आफैंले सामाजिक सन्जालमार्फत् दिएका छन् । ‘११ दिनको अस्पताल बसाइ पश्चात घर फर्किएर आराम गरिरहेको छु । कोभिड १९ का सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएका छन्,’ गजुरेलले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् । केही दिनमा पूर्ण स्वस्थ भएर काममा फर्किने उनले बताएका छन् । यही कात्तिक १० गते उनको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । सुरुमा घरमै आइसोलेसनमा बस्दै आए पनि अक्सिजनको मात्रा घट्दै गएपछि र फोक्सोमा पनि संक्रमण देखिएपछि उनलाई यही कात्तिक २० गते बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको थियो । उच्चस्तरको उपचार सेवा दिएको भन्दै उनले सशस्त्र प्रहरीको नेपाल एपीए
३० कात्तिक, जनकपुरधाम । २१ वर्षीया आरती साहलाई यसपटक दीपावलीको रमझमले छोएन । जनकपुर स्थायी घर भएकी उनी तीन वर्षीया छोरीसंगै कीर्तिपुर अस्पतालमा छटपटाइरहेकी छिन् । एसिड लागेर उनको शरीरको आधा भाग चलेको छ । छोरी रियाको शरीरमा पनि एसिड परेको छ । आमा–छोरीलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउने अरु कोही नभएर जीवनभरि साथ दिने कसम खाएका आरतीकै श्रीमान सञ्जीव साह हुन् । ‘एकातिर मेरो भाइ र अर्काेतर्फ मेरो बहिनी उभिएकी थिइन् । म बीचमा थिएँ । उनी एक्कासी गिलास लिएर आए । मैले गिलासभित्र पानी होला भन्ने ठानें । तर, उनले मेरो जीऊमा खन्याएर भागे ।’ गत बिहीबार बिहानको त्यो पीडादायी घट्नाबारे आरतीले भनिन् ‘गिलासमा एसिड ल्याएको छ भन्ने थाहा पाएकी भए सतर्क हुन्थेँ ।’ एसिड आक्रमणपछि तत्कालै आमा छोरीलाई जानकी हेल्थ केयरमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो । आरतीको अवस्था गम्भीर भएकाले चिकित्सकहरूले कीर्तिपुर अस्पताल
३० कात्तिक, काठमाडौं । तिहारलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चको निशुल्क खाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि सयौँको संख्यामा गरिवहरु खुलामञ्चमा दैनिक पुगिरहेका छन् । महानगरले खुला ठाउँमा खाना खुवाउन बन्द गर्ने निर्णय निकै आलोचित बन्यो । महानगरपालिकामाथि गरिवको पेटमा लात हानेको आरोप लाग्यो । आखिर महानगरले किन यस्तो क्रुर निर्णय गर्‍यो त ? यसमा महानगरपालिकाको आधिकारिक धारणा के हो ? यिनै सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसँग अनलाइनखबरकर्मी विश्वास खड्काथोकीले गरेको कुराकानी : गरीबलाई खुलामञ्चमा खाना खुवाउने विषयमा महानगर ठूलो विवादमा तानियो । खुलामञ्च र सीमित ठाउँमा गरिबले निशुल्क खान पाइरहेका छन् । त्यसमा पनि तपाईंहरुले गिद्देनजर लगाएजस्तो देखियो नि, किन ? काठमाडौं महानगरपालिका देशको त्यस्तो एउटा महानर हो जसले लकडाउन हुनुअघि नै नेपालमा कोरोना आउन सक्
२८ कात्तिक, विराटनगर । सिरहा विष्णुपुर गाउँपालिका- २ का ३५ वर्षीय अरुणकुमार यादवको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि श्रीमती प्रेमशिला र छिमेकीले एम्बुलेन्समा राखेर विराटनगरको विराट नर्सिङहोम (विराटनगर अस्पताल) मा ल्याए । लक्षण कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो थियो । पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजेटिभ रेपोर्ट देखियो । अवस्था गम्भीर बनेपछि अस्पतालले आईसीयू हुँदै भेण्टिलेटरमा राख्यो । विपन्न परिवारका यादवको उपचारका लागि श्रीमतीले ऋण खोजेर अस्पतालमा एक लाख चार हजार रुपैयाँ जम्मा गरिन् । भेण्टिलेटरको बेडचार्ज दैनिक ५० हजार रुपैयाँ थियो । उपचारको बिलसँगै ल्याब र औषधि खर्च पनि बढ्दै गयो । तर, अवस्थामा सुधार आएन । भर्ना भएको ८ दिनपछि २५ कात्तिकमा अरुणको निधन भयो । अस्पतालले उपचारमा लागेको खर्च भनेर ४ लाख ७७ हजार ५ सयको बिल दियो । अस्पताललाई बुझाउने पैसा थिएन प्रेमशिलासँग । उनले अन्तिम संस्कारका लागि शव मा
नेपालीहरुको महान पर्व तिहारको अवसर पारेर शिशिर भण्डारी अभिनित नेपाली मर्मस्पर्शी सर्ट मुभि युट्य्बमा आएको छ । भाईटिका शिर्षको उक्त सर्ट फिल्ममा बिदेशिएको दाई र बेचिएकी चेलीको दर्दनाक कथालाई प्रस्तुत गरिएको छ । शिशिर भण्डारीका साथमा सुनिशा बजगाई, देशभक्त खनाल, सारदा गिरी, लक्ष्मण राज अधिकारी, नरेश बिक्रम खड्का, सन्जय पौडेल, प्रशन्न डि.सी, मलाईका बस्नेत आदिको मुख्य भुमिका रहेको छ ।बालकलाकारको रुपमा चलचित्रमा शिशिर भण्डारीका छोरा असिम भण्डारीले पनि पहिलो पटक अभिनय गरेका छन् । तिहारको समयमा सबैको मन जित्ने आशाले निर्माण गरिएको सर्ट फिल्ममा कथा शिशिर भण्डारीकै हो भने फिल्मलाई गोकुल अधिकारीले खिचेका हुन् ।फिल्मलाई बिष्णु बुढाथोकीले पहिलो पटक निर्देशन गरेका हुन् (भिडियो हेर्नुस)